I-Noopept Powder ehamba phambili (157115-85-0) Abakhiqizi
I-Noopept powder i-molecule yeNootropic efana nePiracetam. I-Noopept powder inomphumela ofanayo ne-piracetam powder, ngoba ihlinzeka ngobumnene …… ..
Umthamo: 1245kg / inyanga
I-Noopept powder (157115-85-0) Incazelo
I-Raw Noopept enamandla kakhulu iyinhlangano yokuthuthukiswa kwengqondo eyenza kangcono kakhulu kunePiracetam ekubhekaneni nokuzwela ngokomzwelo ngemuva kokulimala kwengqondo noma ukuhlukumeza kwengqondo.
I-powder cognitive Raw Noopept powder (i-N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester) ijikeleze izikhathi ezingu-1000 ezinamandla kune-piracetam. I-Piracetam ithuthukisa isigaba sokuqala senqubo yememori, kanti i-Raw Noopept powder ibuye ithuthukise ukuhlanganiswa nokubuyisela izigaba zenkumbulo. I-anti-anxiety, antioxidant, anti-inflammatory, futhi ivimbela i-neurotoxicity kusuka ngokweqile kwe-amyloid ngenkathi iphinde ithuthukise ukugeleza kwegazi.Isiza ngokulala kahle ebusuku, ukucasula, ukulala, ukukhanda ikhanda nokuthola amandla okudingeka ukuthi uthathe usuku. Kubuye kusize ngokukhathazeka, inkumbulo nokucindezeleka.
I-Noopept powder Siziqu
Igama Product I-noopept powder
Brand NAme I-Raw Noopept enamandla
CAS Inombolo 157115-85-0
I-molecular Fi-ormula C17H22N2O4
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-318.373 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic 318.37
Ukuxuba Pi-oint I-97 ° C-98 ° C
I-Half Half-Life Imizuzu ye-30-60
Sukufaneleka I-Raw Noopept powder ngokuyinhloko i-nootropic encibilikiswa ngamanzi, kodwa ngeke ichithe kalula emanzini noma kujusi.
Sukuhlushwa Tukushisa Gcina endaweni eyomile emazingeni okushisa angekho ngaphezu kwe-25 ° C. Hlala ekufinyeleleni kwezingane.
Aukuphikisana Phatha inkumbulo engenakunakekelwa, ukunakekelwa kanye neminye imisebenzi yokucabangela kanye nokuhlukunyezwa kwe-labile ngokomzwelo.
I-Noopept ekhululekile powder (157115-85-0)
I-Noopept (GVS-111) igama lomkhiqizo le-N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, i-molecule ye-nootropic yokwenziwa.
Ngokuvame ukudideka njengengxenye yomndeni wama-racetam, akukho-peptide ehlukile ye-nootropic eyakhelwe eRussia ukuphatha ukwehla kwengqondo ehlobene nobudala. Namuhla, lisetshenziselwa abafana asebekhulile nabancane abasha be-nootropic futhi baba omunye wezidakamizwa ezihlakaniphile kakhulu nezidumile ezisetshenziswa manje.
I-noopept powder enamandla kakhulu kune-piracetam kanye nezinye izidakamizwa ezithuthukisa izidakamizwa ezihlakaniphile, okwamanje isetshenziswe njengesidakamizwa esinamandla kakhulu sokuthola ukwelashwa kwesifo se-Alzheimer, ukuwohloka komqondo, nokunye ukwehla kwengqondo okuhlobene neminyaka emazweni afana neRussia kanye ne-former Soviet Union.
I-Noopept ikhulile ekudume eminyakeni engamashumi amabili edlule futhi okwamanje ingenye ye-nootropics enconyiwe kakhulu ngaphakathi komphakathi.
I-noopept powder (157115-85-0) Inqubo yesenzo
I-Noopept inendlela eyinkimbinkimbi yokwenza. Umphumela we-nootropic womuthi uqondiswa ngenye ye-metabolites yawo esebenzayo (i-cycloprolylglycine) iyafana ngesakhiwo ne-endo native cyclic dipeptide enomsebenzi wokulwa ne-amnesic. Kutholakale ukuthi lesi sidakamizwa sandisa ukubonakaliswa kwe-NGF ne-BDNF ku-hippocampus, sikhombisa izakhiwo ezi-choline-positive emazingeni okuziphatha nase-neuronal, sinciphisa ukucindezelwa kwe-oxidative futhi sithuthukise ukusebenza kwezinhlelo ze-antioxidant, futhi sicindezele i-kinases pSAPK / JNK ne-pERK1 eyenziwe. I-Noopept ithuthukisa inkumbulo ngokwandisa amakhemikhali obuchopho abizwa nge-BDNF nangezinye izindlela.
Izinzuzo of powder Noopept (157115-85-0)
I-Noopept Ithuthukisa Ukusebenza Kokucabanga Nokukhumbula
I-Noopept isusa ubunjini be-Brain
I-Noopept Iseza Ngokucindezeleka
I-Noopept Boosts Focus Focus
I-Noopept Ingasiza Ngama-Alzheimer's
I-Noopept powder enconyiwe (157115-85-0) Isilinganiso
I-Noopept inomthamo wezinga eliphansi kakhulu kune-piracetam (4800mg), isilinganiso sokunconywa sokuthi akukho i-10-30mg.
Ngokwesinye isifundo, i-powder ye-noopept yizikhathi ze-1000 ezingaphezu kwe-piracetam, yingakho isilinganiso esinconywayo sishaywa.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo of powder Noopept (157115-85-0)
Imiphumela emibi yeNoopept powder imnene futhi iningi labasebenzisi aliboni miphumela emibi nhlobo. Kunemiphumela engemihle embalwa ekhona, kepha uma uthatha le nootropic ngokweqile kungadala ikhanda, ukukhathala, isicanucanu nokuqwasha.
Isiqondisi se-Noopept: Yini uNoopept angayenza kuwe?